Ingush uMongameli Yunus-Bek Yevkurov
North-Caucasus iyisifunda kunalokho eyinqaba nethonya elikhulu lolungakahleleki clan nezibopho zomkhaya. Ngesisekelo lokhu kuhola federal uhlose ukwabela abantu sezintaba republic, hhayi ezihlobene ubuhlobo obuseduze elite zendawo engabiza zonke izingxabano, ukuze ugweme ukungqubuzana phakathi kwezinto amaqembu alwayo. Omunye abaphakanyisiwe kulolu shushiso ubhekwa umongameli we Ingushetia, Yevkurov, ogama biography ibekwe ngezansi. Lowo ingush yobuhlanga, kodwa wazalwa ngo North Ossetia futhi wenza umsebenzi wokuphila wezempi e-Armed Forces of Russia.
indodana ongumlimi sika
Life ingush uMongameli Yevkurov iqala ngophawu ngo-1963, lapho ingush umkhaya omkhulu uma ingane wazalelwa Prigorodny wesifunda of North Ossetia. Sekukonke, bazalwane Yunus-Bek Bamatgireevicha eziyisithupha futhi odade abahlanu. Boy wakhulela Angusht ngomzana, athola imfundo jikelele yesibili esikoleni okuhlalwa kuso yaseBeslan.
Indlela emfushane ukuphuma asemaqaqasini zasemakhaya abafana Caucasian ezazikhonze Army Soviet. Ngo-1982, owayezoba umongameli Ingushetia iqala ezempi ngo asemanzini zasePacific Fleet. Ekupheleni ephoqelelwe umnqamulajuqu bomdabu Ossetia lithole isincomo esivela umyalo ingxenye yokwamukelwa edumile Ryazan lixuku School.
Ngemva kokuthweswa iziqu, ngo-1989 esima ku kwesimo endaweni Guards Airborne izingxenye Belarus. Isikhulu ukwazi Yevkurov ngo-1997 iziqu Frunze Military Academy.
indlela Ikusasa Yunus-Bek Bamatgireevicha kuphawulwa iqhaza eziningana imisebenzi yezempi. Ngo elisezingeni Major, wakhonza njengephayona yokugcinwa imisebenzi njengengxenye amasosha Russian eBosnia ngo-1999.
Nge iqhaza Yevkurov senziwa mashi elidume ePriština sezindiza. Ukuze lokhu yena waklonyeliswa umklomelo uhulumeni. Ngokwemibiko ethile, iqembu GRU amabutho ezikhethekile zabantu 18 ukuba abambe futhi ubambe sezindiza kuze main amabutho ombutho.
Lapho wayengumuntu sombutho wezempi, Yunus-bek Yevkurov Ngekudlala indzima Okwesibili Chechen neMpi. Ngokuphindaphindiwe kudinga isibindi siqu futhi eyenza ekufezeni imisebenzi yezempi. Ukuba isikhundla uMphathi Abasebenzi Guards Airborne Regiment, kusho uLieutenant Colonel wawuqondisa ngokwakhe umsebenzi ukukhululwa ekuthunjweni of amasosha Russian nambili.
Izenzo wesikhulu esengamele empini kuye kwaqashelwa. Ngo-2000, Yevkurov waklonyeliswa isihloko Hero yeRussia.
Kusukela Inqubomgomo inkonzo yezempi
Ngo-2001, isikhulu ingush efika Jikelele Abasebenzi Academy, okwathi ngemva kwalokho ithunyelwa Ural lempi nesekela wesifunda osomaqhinga ukuphathwa. Kude ongowokudabuka North eCaucasus, nguye ophatha enkonzweni yakhe aze 2008.
Ngalesi sikhathi e Ingushetia kokhela ingxabano ngempela, okuyinto kusondele senyukele nesimo sangempela ahlomile. Lesi simo yashubisa khona komhlaba Islamic.
Murat Zyazikov sase sachithwa, futhi uhulumeni yokutholwa isinqumo Yokuqashwa kuposi kukamongameli Ingushetia, Yunus-Bek Yevkurov. Alikho ilungu ngababusi, yena bekumele abe sibalo abangathathi hlangothi kobuholi republic nekuhlanganisa umphakathi.
kokugcotshwa kwakhe, waqala nge enhle isenzo - wala kunikezelwa, bephawula isifiso ukusindisa isabelomali izimali. Umongameli omusha we Ingushetia, nomhlangano wokuqala nezakhamuzi republic ngqo mosque eliyingqikithi Nazran. Lapha Wambiza ngokuthi elite ukumsekela kulo ekwenteni imisebenti ikhanda weRiphabhulikhi.
Ukubulawa futhi amahlazo
yisosha ihlolwe ngempumelelo alwa, kodwa ingozi enkulu bemlindile ngisemsebenzini kahulumeni. Ngo-2009, e Nazran phezu kwakhe wadutshulwa ngemvula yezinhlamvu wabulawa.
I inhlabaluhide kaMengameli weRiphabhulikhi Ingushetia uhlaselwe imoto ebihlohlwe iziqhumane ebhodini. Ukuhlaselwa wabulala omunye ikhanda onogada weRiphabhulikhi, kanye sina kwalimala Yevkurov Yunus-Bek, umfowabo, abasebenzi nokuvikeleka. umongameli State of Ingushetia ukuthi ahlolwa njengencenye ezinzima, kodwa emva kwesikhashana wakunqoba zonke izinkinga futhi wavuselela imisebenzi yakhe.
Ngo siqinise impi yokulwa nenkohlakalo somuntu nobuzwe bakhe ku Yevkurov wathatha ihhovisi wenza ingashiswa omkhulu ekuphathweni kukamongameli Ingushetia, ukususa ifa ngonya esidlule.
Nokho, awusebenzi ngaso sonke isikhathi tente empini jikelele ubudlelwane nomakhelwane balo. Eduze ikhanda owaziwa laseNyakatho republic Caucasian isola kubahlanganyeli yesibili Chechen impi futhi umlingisi Russian e ovulekile nobumnene maqondana amalungu komhlaba lobugebengu.
US uhlelo ukhetho: sokugxekwa, abaholi beqembu, izici wesifunda. Uhlelo sokhetho Russia nase-United States (kafushane)
Transnistria iyoba yingxenye Russia noma cha?
Yulia Tymoshenko. Yini etshalwe nendlela abakhululiwe "igesi inkosazana"
Iran: Hamadan isizinda kanye nokusebenzisa kwayo
Indlela ugeza ilungelo inja?
"Stryker" - armored ukulwa imoto. American Stryker armored izisebenzi yenethiwekhi
Lapho lokuqoqa Mint, njengoba kahle omisiwe futhi agcinwe ukuze uthole okungcono kakhulu ukunambitheka, ukunambitheka kanye nezinzuzo
Indlela ukutshala Tulips ekwindla ukujabulela ubuhle entwasahlobo?
Umhlahlandlela: nendlela yokuba werewolf ekhaya okusheshayo?
Iyiphi indima udlalwa kakhulu emhlabeni namuhla amabhange ukuze impesheni?
Isitshalo yesigaba sabasebenzi. Umshini wokwakha ibhizinisi Petersburg
Umkami yenkukhu kanye amakhowe - iresiphi ngezithombe
Isheduli lokugoma ngoba izinja enyakeni owodwa
Bazan Badminovich Gorodovikov: Biography Nomkhaya